Fanasokajiana Grill any ivelany - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Ny Barbecue any ivelany dia alefa any Etazonia / Eropa
Andriamatoa Lu dia nahita ny YiXing Global Logistics tamin'ny Internet. Mila mandefa lafaoro misy barbecue eny ivelany any Etazonia izy tato ho ato. Satria izy no fandefasana voalohany any Etazonia, Andriamatoa Lu dia tsy dia mahalala loatra ny fitaterana ary be fanontaniana. Tamin'ny alàlan'ny fifandraisana tsotra tamin'ny manager Peggy, Andriamatoa Lu koa dia namela ny fampahalalana momba azy ary nila nahafantatra ny fizotran'ny fandefasana any Etazonia. Fantatry ny manager Peggy fa ny haben'ny fatana barbecue an'Andriamatoa Lu dia manodidina ny 8 toradroa ary halefa any amin'ny adiresy manokana any New York, Etazonia. Ka nifandray tamin'Andriamatoa Lu aho, ary nanazava tamim-paharetana an'Andriamatoa Lu momba ny fizotry ny fandefasana LCL any Etazonia sy ny raharaha mifandraika amin'izany, taorian'ny fifandraisan-davitra sasany, Andriamatoa Lu dia nahatsapa fa tena matihanina aho, ary afa-po tamin'ny fizotran'ny serivisy.
Araka ny toe-javatra nisy ny entan'Andriamatoa Lu, notanisiko taminy ny vidin'ny entana marobe nalefa tany Etazonia, ary tafiditra ao avokoa ny entana fa tsy misy vidiny hafa. Taorian'ny dinika andro vitsivitsy dia nanapa-kevitra koa Andriamatoa Lu fa hifidy ny serivisy fandefasana LCL ho any Etazonia. Nalamiko avy hatrany ihany koa ny mpamily mba handray ny entana teo am-baravarana. Rehefa avy nandefa soa aman-tsara ny entan'Andriamatsy Lu tany amin'ny trano fivarotanay tany Dongguan, dia naka sary ihany koa aho, nizaha entana, nanao talantalana hazo, ary nampiditra azy tao anaty boaty. Aorian'izany dia handamina ny fandefasana any Etazonia aho rehefa tapitra ny daty fandefasana.
Ny YiXing Global Logistics dia mifantoka amin'ny serivisy lozisialy fandalovana FBA voalohany. Ny orinasa dia manana traikefa amin'ny fandidiana FBA manankarena sy fantsom-pahaterahana matotra. Tongasoa eto amintsika hiresaka aminay amin'ny fotoana rehetra, laharana an-tariby: laharana telefaona Peggy Zhang 17322126273, ID WeChat: 17322126273.